Madaxweyne Farmaajo oo iska casilay shaqo muhiim ah oo uu ka hayey dalka Maraykanka - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa iska casilay shaqadii uu ka hayey Xafiiska Buffalo ee Waaxda Gaadiidka oo ku yaalla magaalada New York.
Iscasilaada xafiiskan ee Farmaajo ayaa dhacday maalin ka dib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha Somalia ee dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Farmaajo ayaa waxa hawlgalka shaqadiisa dowladda uu u hayey dowlada Maraykanka uga harsanaa todoba sano, isagoo sanadkiiba mushahar ahaan u qaadan jiray lacag gaareysa 83,954 Dollar oo lagu daray lacagta qoyska oo buuxda.
Miisaaniyadda dowlada Somalia ee ay ansixiyeen Xildhibaanadda baarlamanka ayaa muujinaysa in nushaarka Madaxweynaha uu yahay 10,000 oo Dollar oo ay u dheer tahay gunooyinka iyo tas’hiilaadka xafiiskiisa.
Madaxweyne Farmaajo oo taageero badan ka heysta bulshada Soomaaliyeed ayaa laga sugayaa inuu wax badan ka qabto xaalada Somalia oo ay ka jiraan dhibaatooyin wejiyo kala duwan leh.
Bandow Maalmaha soo socda ka dhaqan galaya jidadka Muqdisho & maamulka G/Banaadir oo ka hadlay